Fayyaa - Oromia Shall be Free
DHUKKUBA SUKKAARAA FI MADAA LUKAA – (Diabetic Foot Ulcer) by Kedir Abdulatif Balaa tasa nama mudatutti aansee fayyaa qaamaafii lubbuu baraaruuf jecha sababa miilli dhukkubsate …
Namoonni baay’een qorra kanaan bishaan dhuguu mitii hin yaadaniiyyu. Haa ta’u malee, waan baayyee dhabaa akka jiran beekuu qabu. Akkasumas, bishaan dhuguuf dirqama miirri dheebuu …
Dr. Gurmeessaa Namoonni kanneen dhukkuba dabalataa qaban dhukkuba COVID-19 kanaaf haala addaan saaxilamoo akka ta’an beekamaadha. Namoonni dhukkuba asmii qaban ammoo keessumatti addatti hubamu. Haala …
Ummata keenna kan baadiyaatiif 1. Gabaa loonii dhiisaa( obsaa). Namni daldala looniitiif dhufu hedduun magaala gurguddoo irraa waan dhufuuf san qofa miti tuttuqqaa biyya alaatis …
( #Dr_Gurmeessaa irraa…) 1.Naannoo ijaa fi fuulaa, keessumaa ganama ganama dhiita’uu (hiita’uu) 2. Miilla lamaan naannoo koomee dhiita’uu (hiita’uu) 3. Humna dhabuu, fedhii nyaataa …
Dhukkuba kale yoo jennu dhukkuboonni kalee hedduun kan ka’umsaan, mallattoon, yaalaanis wal hin fakkaanne hedduun waan jiraniif altokkotti hundaibsuun hin danda’amu. Kanaaf dabaree dabareedhaan akkan …
DR. GURMEESSA HINKOOSAA EENYU DHA LAATA? GAMMADAA OLAANAATIN Uummanni Oromoon hayyoota hedduu Oromiyaaf furmaata ta’aan akka cirracha garbaati qaba. Hayyoonni Oromoo fi Oromiyaan qaban ammoo …
Dhukkubni KINTAAROOTII (hemorrhoids) maalii ?mallattoon isaahoo ? furmaata akkamiitu kennamuufii danda’aa?
Dhukkubni kintaarootii kan dhufu hoggaa hiddootni dhiigaa naannoo qaama bobbaatti argaman hamma barbaadamuu ol baballachuun (dilated )dhiiga of keessatti kuufatanidha. Dhukkubni kun yoo xiqqaate nama …
By TesfaNews, The Ethiopian health ministry today confirmed that it has detected a new case of H1N1 (or Swine Flu) virus in the capital Addis …